Archive du 20170801
Tsiandopy Jacky Mahafaly Novonoina fa manelingelina ?
Maty nisy namono tao an-tranony teny Antanambao Ivato ny alin’ny alahady lasa teo i Tsiandopy Jacky Mahafaly, filohan’ny “Syndicat des Inspecteurs généraux d’Etat de Madagascar” , efa avy loholona sy minisitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy tamin’ny fitondran’i Marc Ravalomanana.
Didy jadon’ny fanjakana Mampitandrina ny SeFaFi
Nataon’ny fitondrana fialan-tsiny ny fankalazana ny faha 57 taona niverenan’ny fahaleovantena mba hanakanana izay fihetsiketsehana an-dalam-be manana endrika politika rehetra nandritra ny volana jona,
Raharaham-pirenena Mihatsaravelatsihy isika, hoy i Berthnes
Mpanao politika ary isan’ny efa nitana andraikitra maha mpanolotsain’ny tanàna teo anivon’ny kaominin’Antananarivo renivohitra tamin’ny fotoan’andron’ny ben’ny tanàna Guy Willy Razanamasy I Lalaina Berthnes.
« Force de changement » Mamaramparana ny fitetezam-paritra
Elaela tsy nahenoana ilay vovonana politika Force de changement na ny herin’ny fanovana, raha adika malalaka, izay nilaza fa hanetsika ny vahoaka manerana ny nosy hanehoana fa tsy azo ekena intsony izao fitondrana mijoro izao.
Faha-15 taonan’ny TIM Nankalaza ny azy ny Faritra Atsimo Andrefana
Nahemotra noho ny antony efa fantatra ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny antoko TIM tao Antananarivo misy ny birao foibeny.
Fifidianan’ny FIZAFATO Misy olana indray
Nanao fanambarana teny Ambohipo omaly Andriamanarivo Berkeley, kandida iray mpifaninana amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny fikambanan’ny zanaky ny Faritany Toliara hotanterahina kasaina hatao ny 06 Aogositra ho avy izao.
Raharaha Mamy Rakotoarivelo Misy zavatra manjavozavo
Tsy tonga teny amin’ny Falda Antanimena omaly tolakandro ilay voalaza fa tovovavy sakaizan’Itompokolahy Mamy Rakotoarivelo, Corrine Asmiel,
Alain Ramaroson Hiakatra fitsarana indray anio
Hiverina hiakatra fitsarana eny Anosy ao amin’ny Efitrano faha-2 indray i Alain Ramaroson anio.
Fampanofana ny EPP eto Antananarivo Mila alalana manokana
Namoaka naoty momba ny fampiasana ny fotodrafitrasan’ny sekoly Fanabeazana fototra (EPP) manerana ny Renivohitra ny kaominina Antananarivo tamin’ny alalan’ny Sekretera jenaraliny amin’izao fotoana izao.
Solika maimaim-poana mandritra ny taona Lasan-dRazanamahenina Serge ny loka ho an’Antananarivo
Lasan-dRazanamahenina Serge, raim-pianakaviana iray ny loka tamin’ilay lalao Shell Extra Challenge, nokarakarain’ny orinasa Vivo Energy sy ny tobim-pivarotan-tsolika Shell.
Mpiasam-panjakana Natao hanompo fa tsy tompoin’ny vahoaka
Foto-pisainana napetraky ny delegen’ny boriboritany fahatelo hatramin’ny nandraisany izany toerana izany ny fanomezana fahafaham-po ireo olona rehetra mikarakara taratasy eo anivon’ireo sampan-draharaha misy eny an-toerana.
Malalaka sy mahaleotena ny fitsarana, hoy ny filohampirenena, saingy tokony hamongotra ny kolikoly.
Fanadinana enim-bolana voalohany Nahafa-po ny vokatra ho an’ny CNTEMAD
Vita soa aman-tsara tamin’ny volana Jona lasa teo ny fiodinana voalohany tamin’ilay fanadinana fanao isaky ny enim-bolana nokarakarain’ny sekoly ambony ampitain-davitra CNTEMAD.
Bakalorea teknika Sambany no nisy fitanana an-tsoratra ny hosoka
Notontosaina nanomboka omaly alatsinainy ny fanadinana Bakalôrea teknika andiany faharoa, ho an’ireo mpiadina nisafidy izany. Mahatratra 9.800 izy ireo no miatrika izany.
Tangalamena Zakariasy Patrick “Hamotika firenena ny fanomezana vahana ny Sinoa”
Mampidi-kizo ny firenena Malagasy ny fironan’ny fitondrana Rajaonarimpampianina manome vahana ny sinoa eto Madagasikara, hoy ny Tangalamena Patrick Zakariasy.